Somali - BBC News Somali_中通快递香港查詢
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku horreeya codadka la tiriyay ee doorashada madaxtinnimo, sida ay muujinayaan natiijooyinka horudhaca ah ee uus saakay shaaciyay guddiga doorashada.
Fannaanka da'da yar ee siyaasiga noqday ee tartanka adag kula jira Museveni
Maxaysan ninkan ugu filneyn 35 sano oo madaxtinnimo ah?
Beesha caalamka ma waxay noqotay maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliya?
Waxaa wali taagan ismariwaaga la xiriira hannaanka doorashada Soomaaliya, xilli uu waqtiguna aad usoo dhawaanayo, laakiin garabyada mucaaradka ayaa u arka beesha caalamka in ay tahay rajada kaliya ee xal lagu heli karo.
14 Jannaayo 2021
Rajini Chandy, oo ah atariisho ka soo jeedda koofurta Hindiya, ayaa hadal heyn ka dhalisay dalkaas oo ay haweenku si hagaagsan u lebistaan.
Hoggaamiyaha kooxda ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in dhaqankaas "uu kasbanayo cambaareyn". Sidoo kalena uu qaali yahay.
Arrintan aya atimid kadib markii Kongreska uu soo jeediyay xil ka qaadista Trump
Milatariga Itoobiya ayaa Arbacadii sheegay in ay dileen Seyoum Mesfin, oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii aasaasay xisbiga Tigray-ga ee TPLF.
Maxaa loo dilayaa Shimbirtan Mareykanka ah ee Australia gashay?
Saraakiisha booliska waddanka Australia ayaa sheegay in shimbirtaas ay keeni karto halis caafimaad.
Madaxweynaha Uganda ee muddada ka talinyay dalkaasi Yoweri Museveni ayaa xilka kula tartamaya fannaanka siyaasiga isu baddelay ee Bobi Wine
Maxaa ku dhaca marka madaxweyneyaasha laga gudbiyo xil ka qaadista?
Johnson, Nixon iyo Clinton: Mr Trump ayaa ku biiraya saddex madaxweyne oo Mareykanka soo maray kuwaas oo hore looga keenay xil ka qaadista.
Maamulaha Twitter: Mamnuucidda Trump waa 'sax' balse waa 'halis'
Mareykanka: Waa sidee xaaladda Capitol, toddobaad kaddib markii la weeraray?
Muuqaal, Madaxweyne Muusa Biixi oo ka hadlay ujeedada safarka uu ku joogo Kenya, Muddada 4,20
Madaxweynaha Somaliland Muusa Biixi Cabdi ayaa BBC uga warramay safarka uu ku joogo Nairobi.
Muuqaal, Xaaladda Hooyo 16 sano la nool xanuunka HIV/Aids ee ku nool Hargeysa, Muddada 3,15
Soomaali badan oo cudurka Aids-ka la nool ayaa cadaadis kala kulma bulshada, maantana waxaa dunida laga xusayo sidii loo tirtiri lahaa xanuunkan iyo tacaddiga lagu hayo dadka qaba.
Muuqaal, Dacwad dil oo argagax ka abuurtay dalka Ruushka, Muddada 4,13
Kiiska seddax gabdhood oo walaalo ah oo lagu eedeeyay in ay dileen aabahood ayaa weli ka socdo Ruushka kaas oo argagax ka dhex abuuray shacabka dalkaas.
Muuqaal, Qalalaasaha Gobolka Tigrayga: Afar arrimood oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato, Muddada 3,17
Afar arrimood oo sharaxaya qalalaasaha ka taagan gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya, halkaas oo uu ka socdo howlgal militari.
6 Nofembar 2020
Muuqaal, Waa kuma tababaraha ka dambeeyay koobkii ay qaaday kooxda Daad-Madheedh, Muddada 2,13
Maxamed Maxamuud Dirir-dhabe waa tababaraha xulka gobolka Daad-Madheedh ee Somaliland oo koobkii kubadda cagta ee gobollada qaaday. Haddaba muxuu yahay?
Muuqaal, Suuqa madow ee Nairobi ee lagu iibiyo carruurta la soo xaday, Muddada 11,54
BBC Africa Eye oo dhexgashay shabakado sharcidarro ah, waxayna la kulantay carruur laga soo afduubtay hooyooyiin guryo la’aan ah, laguna iibiyay wax ka yar $300 oo dollar.
16 Nofembar 2020
Maxay tahay sababta loo joojiyay tartankii kubadda ee gabdhaha Somaliland?
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa hakisay tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo maanta lagu waday in Hargeysa looga furo kooxaha gabdhaha ah ee gobollada Somaliland.
Messi oo jebiyey rikoodh yaalley muddo 40 sano ah
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 644-aad ee Barcelona intii ay socotay guushii ay ka gaaDHeen Real Valladolid si uu u jabiyo rikoorka Pele ee goolasha ugu badan ee hal koox loo dhaliyo.
23 Disembar 2020
Ciyaartii Mareykanka iyo Iiraan ee hawada diyaaradaha looga xiray
Labo sano kaddib markii ay xulalka Mareykanka iyo Iiraan isku arkeen ciyaartii Koobka Adduunka ee 1998-kii, waxay mar kale kulmeen sanadkii 2000. Ujeeddadu waxay ahayd in ciyaartaas ay xiriirkooda hagaajiso - laakiin wax walba sidii loo qorsheeyay uma dhicin.
Maxaa ka dhalan kara in Maraykanku Saxaraha Galbeed u aqoonsado dhul Morooko leedahay?
Faalooyinka iyo maqaallada ay qoreen wargeysyada Morooko iyo Algeria ayaa ku kala aragti duwan in Maraykanku u aqoonsaday Saxaraha Galbeed dhul ka mid ah dalka Morooko.
Maxay tahay sababta uu Amiirka Imaaraadka u iibsaday koox neceb Carabta?
Sheekh Xamad bin Khaliifa Al Nahyaan, oo xubin ka ah qoyska boqortooyada Abu Dhabi, ayaa saxiixay heshiis maalgashi ah oo uu la galay kooxda kubadda cagta ee laga leeyahay Israa'iil, Beitar Jerusalem.
8 Disembar 2020
Diego oo dalkiisa Argentina ugu ciyaari jiray dhanka weerarka ahaana maamulaha kooxda qaranka ayaa waxa lagu guuleystay bishan November qalliin dhanka maskaxda looga sameeyay.
Ilmahaaga ma uga tagi lahayd qof aan la joogin?
Xilli ay waalidiintu sanadkan la dhibaatoodeen isku dheellitirka xannaaneynta carruurtooda iyo shaqada, waxaa soo baxay shirkado tiknoolojiyad adeegsanaya oo xal haya.
10 Disembar 2020
Sida maktabad Islaami ahayd oo la burburiyay ay dunida ku gaarsiisay xisaabta casriga ah
Inkasta oo markii dambe ay meesha ka baxday maktabaddaas, haddana waxay horseeday isbaddal dhanka maaddada xisaabta ah, guud ahaan dunida.
7 Disembar 2020
'Waxay ila noqotay in dhiiggeyga iyo manideyda ay sun yihiin'
Christopher Klettermayer wuxuu ku ogaaday inuu HIV qabo ‘si lama filaan ah’. Iyadoo 1-da bisha December la xusayo maalinta AIDS-ka Adduunka, khubaradu waxay sheegayaan in wali 12 milyan oo ruux aysan heli karin dawooyinka caawinaadda ah, iyadoo Covid-19 uu halis galinayo horumarkii horay loo sii gaaray.
Waxkasta oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato natiijada doorashada Mareykanka 2020
4 Nofembar 2020
Muxuu dhaqaalaha Turkiga aad hoos ugu dhacay?
lacagta Turkiga ee Lira ayaa hoos u dhac ku yimid xilli ay malgashatada ay walaac ka muujinayaan dhaqaalaha Turkiga kaddib saameynta feyraska Koroona iyo xiisadda ka dhex taagan dalalka ka tirsan gaashaan buurta Nato.
Doorashada Mareykanka 2020: Sida Trump u badelay caalamka
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 15 Jannaayo 2021
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 14 Jannaayo 2021
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 14 Jannaayo 2021
Xiga Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 15 Jannaayo 2021
maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaan weli soo dhisin guddiyadii uga qeybgali lahaa doorashada, waxayna shardi ka dhigeen in Gedo lagu celiyo gacanta maamulka Jubbaland.
Maxay yihiin shanta arrimood ee ugu muhiimsan ee sababay khilaafka ku saabsan doorashada Soomaaliya ee 2020/21.
"Waxaa jira wax ka weyn oo ka muhiimsan lacagta, caanimada iyo guusha- taasi oo aan filayo iney tahay qoyska, jacaylka iyo deganaanshiyaha dhanka maskaxda."
Gabar dhalinyaro ah oo Hindu ah ayaa sheegtay in ilmo ay ka soo dilmeen kaddib markii laga soo kaxeeyay ninkeeda oo Muslim ah iyadoo la raacayo sharciga cusub ee ay Hindiya dhaqan gelisay.
Fannaanka Bollywood-ka ee caanka ah wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaaraa heesaha luuqadda ingiriiska ee pop-ka.
Dhowaan ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay Gaalkacayo, kaas oo lala eegtay xarun dowladdeed.
Mid Kenya na, noo quuri meyso kana aqbali meyno, annaguna ma nihin dad loo adeegsado dad kale."
Shan Arrimood oo ay ku heshiiyeen Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyada iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku xusan yihiin arrimo ay ku heshiiyeen.